Dib u Eegid Nadaafadeed: 15 Soo Wareegida Macluumaadka Bilaashka Bilaashka ah
Qodobka 12 iyada oo la adeegsanayo qalab kala duwan iyo barnaamijyada soo saaridda xogta. Qalabkani wuxuu dhexmari karaa goobo, aqoonsado oo soo aruuriyo macluumaad faa'iido leh, oo xoqin iyada oo ku saleysan shuruudahaaga. Intaa waxaa dheer, waxay badbaadiyaan xogta la xoqay ee ku yaala macluumaadka ay ku qoran yihiin ama waxay ku soo qaadaan mashiinka kombiyuutarkaaga. Halkan waxaan ka wada hadalnay 15 qalab oo shabakadeedka ugu fiican ee shabakadda internetka.
1. Raashinka quruxda badan
Waa maktabad caan ah Python oo loogu talagalay in la xoqdo faylasha XML iyo HTML. Waxaad ubaahan tahay inaad rakibto oo aad dhaqaajiso qalabkan shabakada ee shabakadda oo ha u qabto hawlo kala duwan. Waxaad si habboon u isticmaali kartaa nidaamka Debian iyo Ubuntu.
Tani waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican qalabka kaydinta s. Waxay noo ogolaanaysaa inaan xoqno macluumaadka laga helo goobta aasaasiga ah iyo horumarinta goobta iyo wuxuu leeyahay casriga casriga ah, user-friendly user interface.
Mozenda waa mashiinka wax lagu sawirayo iyo nuqul warbixinta. Waxay bixisaa maadooyinka qaabab kala duwan oo waa dhibicda-dhibicda.
Waa sawir gacmeed muuqaal ah oo loo isticmaali karo in laga ururiyo macluumaadka internetka. Waxaad ka abuuri kartaa API-ka meelo kala duwan adigoo isticmaalaya barnaamijkan.
(Octoparse) waa macmiilka shabakada ee macaamiisha iyo qalab wax soo qaadista loogu talagalay dadka isticmaala Windows. Waxay u rogi kartaa macluumaadka habdhismeedka ama qaabaysan ee nidaamyada qaabaysan oo aan loo baahnayn codsiyo.
Waa midka ugu fiican "href =" https://semalt.com/qa/free-web-scraper..htm "style =" text-decoration: none none: border-bottom: 1px solid; "> barta shabakada bilaashka ah s, barnaamijyada fiirinta xogta, iyo kuwa gurguurta, Waxay kuu ogolaaneysaa inaad isku dhejiso goobo kala duwan isla markaana u sahlaya bogagga shabakadaha
Waa xalka ugu dambeeya ee dhibaatooyinka la xidhiidha xogta, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso barnaamijkan, soo dir codsi iyo helitaanka xogta sida loo rabo. )
8. Wadarta Guud
Waxaa la ogyahay in ay bixiso dataset furan oo ah bogagga shabakada ee la jabiyey, waxay ku soo noqotaa xog qaas ah qaab qaabeysan oo habaysan, waxay daabacaysaa metadata kuwa isticmaala, waxayna bixisaa macluumaad ka duwan kala duwan Sawirada
Waa adeeg macquul ah oo wax ku ool ah oo leh sifooyin badan iyo sifooyin ah, waxay xoqin kartaa oo u rogi kartaa xogtaada qaaska ah qaab qaabaysan, oo natiijooyinka JSON iyo Qaababka CSV.
10. Mawduucyada Maqalka
Waa wax aad u wanaagsan kuwa doonaya inay xogta ka tiriyaan muuqaallo iyo cajalado kala duwan. shirkadaha farsamada oo kuu oggolaanaya inaad abuurto wakiilka garabka shabakada ee kaliya.
Waa kumbiyuutarka xogta oo kaliya oo nidaamiya xogtaada oo ku xariira bogagga shabakadaha dhowr daqiiqo gudahood. Waxay ku habboon tahay horumarinta iyo barnaamijyadeyaal waxayna ka dhigan kartaa goobtaada API-ga.
13. Isticmaalka Macmiilka Macluumaadka
Waxay ku timaadaa qorshooyinka bilaashka ah iyo qiimaha lacagta ah waxayna ka caawisaa xogta aruursan ee badan boggaga internetka, dukumiintiyada PDF, XML iyo faylasha HMTL. Codsigan muraayadda waxaa la heli karaa oo keliya isticmaalaha Windows.
14. Shabakada fudud ee shabakadda
Waa shabakada sawir gacmeedka iyo barnaamijka saaridda xogta ku haboon ee loogu talagalay noocyada ugu sarreeya iyo kuwa bilawga ah. Waxay leedahay sifooyin gaar ah oo xogta waxaa laga xaaqay faylasha HTTP kala duwan.
Wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhisto mashaariic kala duwan oo leh sawir-gacmeedka makarafoonka waana mid ka mid ah qalabka wax lagu qoro. Waxay ka saartaa macluumaadka waxtar leh cinwaanada emailka iyo goobaha shabakada bulshada Source .